UpLead: Manamboara lisitra Prospect B2B marina mba hampandeha ny fampielezan-kevitra sy hanakatona ny varotra | Martech Zone
Talata, Martsa 23, 2021 Talata, Martsa 23, 2021 Douglas Karr
Betsaka ireo matihanina amin'ny varotra izay manohitra mafy mividy lisitra ho an'ny prospecting. Ary misy, mazava ho azy, misy antony tena lehibe antony:
Fanomezan-dàlana - ireo prospect ireo dia tsy nilefitra tamin'ny fangatahana avy aminao ka nanao vy very ny lazinao tamin'ny fanoratana azy ireo. Ny fandefasana mailaka tsy ampoizina dia tsy manitsakitsaka ny fitsipiky ny CAN-SPAM any Etazonia raha mbola manana mekanisma fialana ianao… fa mbola hita ho fanao maloka io.
Quality - misy loharanom-baovao an'arivony manerana ny Internet ary; indrisy, maro amin'izy ireo no efa lany andro na tsy marina. Vokatr'izany, ny ezaka ataonao hangataka ny mpandray dia mety hiteraka taham-pahavitrihana - na ratsy kokoa - laza mailaka simba.
laza - Ny antso an-tariby na ny fandefasana mailaka amin'ny fifandraisana izay tsy anananao fifandraisana dia mety handratra ny lazan'ny orinasanao ary hampahafantatra anao amin'ny maha-spam anao anao.
Ny lisitra Prospect novidiana no mahazatra, fa tsy ny faningana
Folo taona lasa izay dia niasa tamin'ny a sehatra marketing mailaka miorina amin'ny alalana. Isan'andro dia nanoro hevitra ny mpanjifa tsirairay ny ekipa manafaka anay na oviana na oviana mividiana lisitra rehetra ary ahazoana antoka fa nahafahan'izy ireo niditra an-tsokosoko indroa ho an'ny mpamandrika mailaka vaovao. Raha noteneninao akory ny fanafarana a lisitra novidiana, notenenin'ny mpitondra ao amin'ny orinasa ianao. Amin'ny dingam-panafarana dia mila manamarina boaty ianao izay nilaza fa tsy nividy ilay lisitra ianao.
Ny tsiambaratelo maizina, mazava ho azy, dia ny ekipa mpivarotra azy manokana fividianana lisitra ho an'ny mailaka ivelany sy fiantsoana mangatsiaka paikady isan'andro. Mbola manao ihany izy ireo - efa nisoratra anarana tamin'ny sehatr'izy ireo imbetsaka aho nandritra ny taona maro ary nipoitra tamin'ny fampielezan-kevitra vaovao indraindray.
Tsy izany ihany fa takatry ny ekipa mpivarotra iray manontolo fa mivarotra fifanarahana imailaka amin'ny mpanjifa izay mividy lisitra izy ireo. Rehefa mahazo vola ianao amin'ny fampitomboana ny habetsaky ny mailaka… tsy dia raharahianao ny toerana ahazoan'ny mpanjifanao adiresy mailaka raha mbola tsy misy fitarainana SPAM ianao.
Fantatro fa vitsy ny orinasa manana varotra ivelany sy ezaky ny varotra izay tsy mampiditra fifandraisana mangatsiaka amin'ny paikadiny varotra sy varotra. Ny zava-misy tsotra dia ny lisitry ny antso an-tariby sy ny mailaka novidina tamin'ny mailaka dia afaka miasa raha manana ny lisitry ny kalitao avo indrindra ianao, mikendry tsara ny vinavinanao, ary manaja fa tsy manosika ny varotra na hitabataba valiny ianao.
Ahoana ny fampiasana ny angona Prospect novidiana
Raha afaka nanao izany isika raha tsy nividy angon-drakitra antenaina, mino aho amin'ny maha mpivarotra antsika rehetra. Na izany aza, fantatray fa mila manatrika ny vinavinan-tseranana isika hananganana fahatsiarovan-tena amin'ireo marika - ary ny boaty mailaka dia fomba iray mahomby hanaovana izany. Ity ny torohevitro momba ny fividianana ny lisitry ny vinavinan-javatra:
Lisitra Vetted - Ny fahamarinan'ny angona no fanambinao lehibe indrindra raha lisitra no resahina. Ny lisitra B2B dia mihodina amin'ny haingam-pandeha avo roa heny rehefa mifindra orinasa ny olona. Ary miova tsy tapaka ny andraikitry ny mpiasa satria mifindra amin'ny asa mankany amin'ny asa ao anatin'ny orinasa ny mpiasa. Ny fampiasana mpamatsy lisitra izay misy toetr'andro farany, voatahiry data avy amin'ny loharano maro dia tena manakiana.
Segmentation - Ny fahazoana ny toerana misy ny jeografika, ny toetra mampiavaka azy ary ny andraikitrao sy ny andraikitr'ilay fanantenanao dia tena ilaina raha te-hivarotra amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka ianao. Arakaraka ny maha avo ny fifandraisany amin'ny fanantenanao no mampihena ny risika very azy ireo amin'ireo fifandraisana voalohany ireo.
sarobidy - Ny famafazana ny feonao amin'ny onjam-pivoaran'ny SPAM dia tsy fahaverezan'ny mpandray mailaka anao fotsiny, fa hanimba ny marikao sy ny lazanao koa. Omeo sandam-bola sy loharano fanampiny ao amin'ny mailakao voalohany ho an'ny vinavina ary araho fotsiny rehefa misy famantarana ny firotsahana.
Lisitra Prospect UpLead voamarina
Uplead manamarina ny angon-drakitra antenain'izy ireo amin'ny alàlan'ny dingana 8-dingana, ao anatin'izany ny firaketana an-tsoratra ampahibemaso, angona antontan-taratasy fahatelo, fianarana ny milina, fanandramana ary fanamarinana, fanamarinana amin'ny fotoana tena izy ary valiny omena mba hanavaozana ny angon-drakitra UpLead hanatsarana kokoa ny kalitao.
Raha nifidian'ny mpampiasa, UpLead dia voamarina ho loharanom-pahalalana mitarika marina indrindra raha ampitahaina amin'ny lisitra omena avy amin'ny ZoomInfo, D & B Hoover, ary Clearbit. Ny vokatra UpLead dia misy:
mpitrandraka - Ny fikarohana amin'ny alàlan'ny mombamomba ny 54 tapitrisa dia mora. Ampifanaraho fotsiny ny fikarohana ataonao amin'ny alàlan'ny sivana 50 mahery hahitana fitarihana izay mifanaraka amin'ny mombamomba anao. Ampidiro avy eo ny mombamomba azy ireo hahitanao ny mombamomba ny fifandraisany mivantana ary miditra segondra.
Fanatsarana ny data - Efa manana ny database-nao ve ianao? Ampidiro ao amin'ny UpLead ary manatsara azy amin'ny alàlan'ny fampidiranao sehatra 50+ amin'ny antsipirian'ny fifandraisana amin'ny antsipiriany ao anatin'ny segondra.
Finday amin'ny mailaka - Fitaovana mailaka mandroso izay ahafahanao mifandray amin'ireo mpanapa-kevitra lehibe izay manandanja aminao.
Fanamarinana mailaka - Fanamarinana amin'ny fotoana tena izy ho an'ny adiresy mailaka rehetra misy 95% ny tahan'ny fahamarinana azo antoka. Azonao atao ny misafidy ny hanao sainam-pirenena ary tsy hampiasa mailaka mahasarika.
Chrome Extension - UpLead's extension Chrome dia fomba mora hahitana orinasa B2B sy fampahalalana momba ny fifandraisana ao anatin'ny segondra.
Teknolojia - Miteraha avy hatrany lisitry ny fitarihana mahay mifototra amin'ny teknolojia ampiasain'ny mpividy tsara anao - na mbola tsy nampiasaina, mampiditra angon-drakitra mihoatra ny 16,000.
API - Ny UpLead API dia manome angon-drakitra sy fifandraisan'ny orinasa hanampy amin'ny fampivoarana ny orinasanao.
Na iza na iza mpivarotra mitady ny hitarika fitarihana bebe kokoa ho anao orinasa, na mpivarotra iray izay miezaka ny hifandray amin'ny fanantenana lehibe, azonao atao ny miantehitra amin'ny UpLead hanao ny manainga mavesatra
Manomboha fitsapana maimaim-poana amin'ny UpLead
Tags: angona b2blisitra b2bb2b fanantenanamazavad & bd & b hooversdun sy bradstreetteknolojiaupleadzoominfo
Inona avy ireo famaritana Meta? Fa maninona izy ireo no manakiana ny paikadin'ny motera fikarohana?